विश्वकप प्रिभ्यु : के पोर्चुगलले रोक्न सक्ला त स्पेनको अपराजित यात्रा ?
फिफा विश्वकप फुटबल
इतिहास हेर्ने हो भने दुई टोलीबीच भएका ३५ खेलमा पोर्चुगलले मात्र ६ खेल जीतेको छ भने स्पेनले १६ मा जीत हासिल गरेको छ
शुक्रबार, १ आषाढ २०७५, सगरमाथा पोष्ट
एजेन्सी, १ असार
रसियामा बिहिबारबाट सुरू भएको २१ औं फिफा विश्वकप फुटबलमा शुक्रबार दुई युरोपेली जायन्ट स्पेन र पोर्चुगल भिड्दैछन्।
ग्रुप 'बी'को यस भीडन्तलाई समूह चरणकै रोमाञ्चाक र प्रतिष्पर्धात्मक खेल मानिएको छ।
पछिल्लो पटक यी दुई आइबेरियन छिमेकी सन् २०१० को विश्वकपमा एकअर्कासँग भिडेका थिए, जसमा स्पेनले पोर्चुगलमाथि १-० को संघर्षपूर्ण जीत हासिल गर्दै पोर्चुगललाई घर पठाइदिएको थियो।
८ वर्षपछि विश्वकपको फुटबल मैदानमा फेरि एक पटक हुन लागेको यी दुईको भिडन्तमा पोर्चुगलको लक्ष्य सन् २०१० को विश्वकपको बदला लिने अवसर हुने छ भने स्पेनको त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्ने हुनेछ।
दुई टोली हालसम्म ३५ पटक एकअर्कासँग भिडेका छन् जसमा स्पेनले १६ खेल जितेको छ भने पोर्चुगलले केबल ६ खेलमात्र आफ्नो पक्षमा राखेको छ।
त्यसैले पनि पोर्चुगलमाथि जीतको आँकडा थप्ने दबाब छ भने स्पेनलाई जीतको संख्या थप्ने चुनौती छ।
सोचीको फिस्त ओल्म्पिक रंगशालामा नेपाली समयअनुसार राति ११.४५ मा हुने खेलमा पोर्चुगल आफ्ना स्टार स्ट्राइकर क्रिश्चियानो रोनाल्डोको मुख्य भरमा छ भने स्पेनी टोली आफ्नो चर्चित खेल शैली 'टिकीटाका'मा भर पर्नेछ।
युवा तथा अनुभवी खेलाडीले भरिएको स्पेनी टोलीमा दुई दिनअघि भएको प्रशिक्षकको बर्खास्तीले केही प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै स्पेनी टोली मानसिक रूपले पनि बलियो रहेको बताइन्छ।
सन् २०१० को विश्वविजेता स्पेनका लागि वर्तमान युरो कप विजेता पोर्चुगल कडा चुनौती हो।
पोर्चुगलका फुटबल प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषको नजरमा स्पेन पनि बलियो टोली हो।
यसका बाबजुद् पनि पोर्चुगल उत्कृष्ट नतिजा निकाल्दै विश्वकप जित्ने मनोबल र लक्ष्यका साथ रसिया आएको छ।
निर्विवाद रुपमा क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डो हेर्नलायक खेलाडी हुन् । ३३ वर्ष रोनाल्डो अझै फर्ममा छन् । तर, ४ वर्षपछि के हुन्छ त्यो कसलाई थाहा ? त्यसैले धेरैले रोनाल्डोका लागि यो अन्तिम विश्वकप हुने अड्कल काटेका छन् । यद्यपि रोनाल्डो अर्को विश्वकप पनि खेल्ने बताउँछन् ।
रियल म्याड्रिडका यी स्टार क्लबका लागि जति उत्कृष्ट खेल्छन् । आफ्नो देशका लागि पनि उनले उत्तिकै योगदान गरेका छन् । तर, दुग्भार्य देशबाट खेल्दा ठूला अवसरमा चुक्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्छ । यस्तोमा आफुमाथि लागेका आरोप चिर्नुपर्ने चुनौती रोनाल्डोमाथि छ । प्रशिक्षक फर्नान्डो सन्तोषको टोलीका बर्नार्डो सिल्भा, आन्दे्र सिल्भा, गिल्सन मार्टिन्सलगायतका खेलाडीको खेल पनि विशेष हुनेछ ।
स्पेनका आन्द्रेस इनिस्टाका लागि पनि यो अन्तिम विश्वकप हो । विश्व फुटबलमा सम्भव सबै उपाधि इनिस्टाले जितिसकेका छन् । र पनि यी सिर्जनात्मक मिडफिल्डर आफ्नो यात्रालाई अघि बढाउन चाहन्छन् । सन् २०१० मा स्पेनलाई विश्वकप जिताउने क्रममा उनले फाइनलमा निर्णायक गोल गरेका थिए । सन् २००८ र ०१२ को युरोकपमा पनि उनको प्रदर्शन महत्वपूर्ण थियो । तर, स्पेनिस टोली गत संस्करणको विश्वकपमा समुह चरणबाटै बाहिरियो । उक्त हारलाई बिर्साउन पनि यसपटक इनिस्टाको प्रेरणादायी खेलको खाँचो छ ।
टोलीमा डेनी कार्भाजालको सट्टा अल्भारो अड्रियोजोलाले सुरुवाती एघारमा स्थान बनाउने संभावता धेरै छ । डियगो कोस्टा अग्रपंक्ति तथा इस्को र डेभिड सिल्भा मिडफिल्डमा हुनेछन् । यता, पोर्चुगलको अग्रपंक्तीमा गुडिस र रोनाल्डो हुनेछन् । मध्यपंक्तिमा पेपे र फोन्टेले खेल्नेछन् । मिडफिल्डमा बर्नार्डो सिल्भाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।